साताको अन्तिम कारोबार दिन तोलामा ७०० ले बढ्यो सुनको मूल्य
वैशाख ३, काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढ्ने क्रम जारी छ । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रवार पनि नेपाली बजारमा पहेंलो धातु सुनको मूल्य बढेको छ । स्थानिय बजारमा अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात् बिहीवार रू. ३०० ले बढेको सुनको मूल्य शुक्रवार रू. ७०० ले बढेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रवार छापावाला सुन प्रतितोला रू. ९० हजार ५०० मा कारोबार भएको छ । बिहीवार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रू. ८९ हजार ८०० मा कारोबार भएको थियो । बिहीवारको तुलनामा शुक्रवार छापावाला सुन प्रतितोला रू. ७०० ले बढेको हो ।
त्यसैगरी, तेजाबी सुन प्रतितोला रू. ९० हजारमा कारोबार भएको छ । बिहीवार तेजाबी सुन प्रतितोला रू. ८९ हजार ३५० मा कारोबार भएको थियो ।
यस्तै, शुक्रवार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । बिहीवार प्रतितोला रू. एक हजार २९० मा कारोबार भएको चाँदी शुक्रवार रू. एक हजार ३०० खरीदविक्री भइरहेको छ । बिहीवारको तुलनामा शुक्रवार चाँदी रू. १० ले बढेको हो ।